Intaqaab eeloogo galmood naagaha | shumis.net
Home » galmada » Intaqaab eeloogo galmood naagaha
Intaqaab eeloogo galmood naagaha
Waxaa jiro siro badan oo dumarka u qarsoon taasi oo aaysan jecleyn marnaba ineey la wadaaagaan shaqsi kale haba noqdo seeyga aay u dhaxaan, sida raga qaarkoodba aay u jiraan siro aay ka qariyaan dumarka ayaa dumarka ayagana ragooda ugu qarsoon sirahaasi aay qaarkood u arkaan ineey tahay wax ceeb ah.
Hadaba bahda qorayaasha shabakada kobciye.com waxey kuusoo gudbinayaan dhowr arimood oo sir u ah dumarka, maalinta beri ahna waxaan daabici doonaa dhowr arimood oo sir u ah ragga balse maadaama dumarka yihiin hogaanka dunida qormadena maanta waxan ku hormarineynaa dumarka.
* Hadii aay gabadho leedahay calaamad ku taalo jirkeeda meel ka mid ah sida garaafo ama bar aad u weyn waxey u tahay sir oo ma jeclo iney la wadaagto ninkeeda waxeey aad ugu dadaashaa mar weliba sidii uusan u arki laheyn ninkeeda bartaasi ayada sirta u ah.
# Dumarka waxey si sir ah aay ugu qarsataa ninkeeda erayada aay banaanka kasoo maqasho ayadoo markaasi ninkeeda ugu dhigeyso erayo aay markaasi ayada si toos ah u weeydiineyso, waayo dumarka marnaba ma jeclo in uu ninkooda ogaado hadalada aay kula hadlayaan in aay ka keentay dumar kale ee ka baxsan noloshooda.
$ Dumarka waxaa sir u ah waxyaabaha aay u isticmaasho biiilka hadaba hadad nin tahay marnaba ha isku dayin inad xaaskaaga kala xisaabtanto lacagaha biilka iyo halkey ku baxeen maxaa yeelay dumarku taasi aad bey ugu cadhoodaan waxeyna kamid tahay arimaha sirta u ah aaysan marnaba la wadaagin raggooda.
% Dumarka waxaa sir u ah ninka aay ka helaan ayagoo la hadlin iney ka heleen oo aay jeclaadeen aay ku dareensiiyaan indhaha keliya waxey si dadban u eegayaan wiilka aay ka heleen si amrkuu arko gabadha oo soo eegeyso u u dareemo iney ka heshay…
Waxaa kaloo jiro siro badan oo dumarka u qarsoon oo aaysan marnaba jecleyn iney si toos ah ula wadaagaan raga, waxaan kaloo maalinta beri ah soo bandhigi doonaa arimo kale oo sir u ah raga soomaaliyeed.
Title: Intaqaab eeloogo galmood naagaha